Qaraxyo waaweyn oo geystay dhimasho iyo dhaawac badan shacab muslimiin oo ka dhacay masjidka ku yaala gudaha suuqa bakaaraha magaalada muqdisho | Halganka Online
Qaraxyo waaweyn oo geystay dhimasho iyo dhaawac badan shacab muslimiin oo ka dhacay masjidka ku yaala gudaha suuqa bakaaraha magaalada muqdisho
Qaraxyo gaystay dhimasho iyo dhaawac muslimiin badan uu ka soo gaaray ayaa maanta waxaa uu ka dhacay gudaha Suuqa Bakaaraha magaalada Muqdisho kuwaasi oo lala eegtay goobo lagu cibaadaysto oo ay ku sugnaayeen Dad Muslimiin ah.
Qaraxyadaani oo ahaa Miinooyin la dhigay gudaha Masjid kuyaala Suuqa Bakaaraha gaar ahaan qeybta Cabdule Shideeye ayaa waxaa ay qarxeen kadib salaadii duhur xiligaasi oo Masjidka uu ka istaagay Sheekh Fu’aad Max’ed Khalaf Allah Dhowree oo ka tirsan saraakiisha Xarakaada Mujaahidiinta Al Shabaab.
Markii ay qaraxyadu dhaceen kadib ayaa waxaa goobta gaaray in ka badan 15 gaari oo nuuca Ambalaasta ah kuwaasi oo soo daabulayay dhaawaca dadkii qaraxyada ku waxyeeloobay halka meydadkiina in mudo ah ay ku xareesnaayeen gudaha Masjidka.
Dhimashada iyo dhaawaca ayaan tiradooda si rasmi ah loo heyn hase ahaatee wararka qaar ayaa sheegaya in dhimashado ay gaarayso ku dhawaad 40 ruux halka dhaawacuna uu intaasi ka badanyahay.
Qaraxa weyn oo khasaara badan dhaliyay ayaa ka dhacay Suuqa Cabdalla Shisdeey gudaha Suuqa Bakaaraha waxaana xiligii qaraxu dhacayay Masjid uu Kitaab ku akhrinayay Sheykh Fu’aad Mux’med Khalaf oo kamid ah saraakiisha Shabaabul Mujaahidiin.
Saraakiil katirsan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa Halganka.wordpress.com u xaqiijiyay in qaraxaasi dad Muslimiin Rayid ah ku dhamaadeen islamarkaana uu Bad baaday Sheykh Fu’aad Mux’med Khalaf.
Sheykh Fu’aad wuxuu Dhawaac Khafiif ah kasoo gaaray gacanta Midig waxaase jira Arday Badan iyo shacab oo ku Shahiiday Qaraxa lala eegtay Masjida Cabdalle shideeye, qaraxan oo ay soo agaasimeen Shirkadda Black water yahuuda iyo mareekanka leeyahay ayaa moodaa in loo adeegsadey fulintiisa qabuura caabudka mushrikiinta.
Masjidka uu qaraxu ka dhacay oo ahaa labo dabaq ayaa inta badan dadka waxyeeloobay waxaa ay u badanyihin kuwii ku sugnaa dabaqada hoose ee masjidka halkaasi oo ah goobta qaraxyadu ay ka dhaceen.
Isku daygan lagu doonayay in lagu joojiyo Dacwada Islaamiga ah ee ka socoto Masaajidyada magaalada Muqdisho ayaa qayb ka ah digniin uu horay u bixiyay Afhayeenka Xarakada Shabaabul Mujaahidiin Sheykh Cali Dheere oo kal hore sheegay in Muqdisho ay ka howlgashay shirkadda Black Water oo dalalka Afghanistan iyo Ciraaq ka fulisay qaraxyo dad badn ku dhinteen oo ka dhacayay Masaajidyada iyo suuqyada si sumcadda Mujaahidiinta loo bah dilo.
Sikastaba ha ahaatee waxaa maanta magaalada muqdisho ka dhacay musiibo aan hore loogu aqoonin shacabka muslimiinta soomaaliyeed iyadoo waayadaan la adeegsanaayo kuwa caqdiidadooda hore u dhuntay oo gaala gacmaha u hooraarsanaaya waliba isku sheegaaya inay gaalada daacad u yihiin.
« Waaliga Dhoobleey “Shacabka waxaan u sheegaynaa in Gaandi uu yahay Gaal Naag Faransiis ah qaba, Axmed Madoobe-na kama ag dheera isaga ayuu heshiis lagalay waana ku Jihaadaynaa Beelaha Tunni iyo Biida,Haatimi ee Gibil Cad ee dega magaalada Baraawe oo Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ku wareejiyey hub farabadan.(SAWIRO) »